MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဩဂုတ် 2020 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Money FAQs mm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 31, 2020 Categories General mm
Lo Ta YA FAQS mm
၁။ လိုတရ ဆိုတာဘာလဲ။
လိုတရ ဆိုသည်မှာ သင်၏နေ့စဉ် လိုအပ်သမျှ သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုံလင်စွာ သိရှိနိုင်မည့် MPT ၏ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၂။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအနေဖြင့် *2727# ကိုခေါ်ဆို၍ လိုတရ၏ ဒေါင်းလုဒ် URL ကိုရယူလိုက်ပါ။လိုတရဝက်ဆိုက်ဒ်မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပြီး Apple Store နှင့် Google Play Store တို့တွင်လည်း ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသည်။(App Store နှင့် Google Play Store တို့မှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူခြင်းအတွက် Data Charges များကျသင့်ပါမည်။ )
၃။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို Android ဖုန်းတွင်သာမက iPhone များဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် နောက်ဆုံးရ သတင်းအစုံ၊ဂိမ်း၊ဗေဒင်၊တရားတော်၊မိုးလေဝသ သတင်းများ၊ ရှေးဦးပြုစုနည်းလမ်းများ၊ ကူပွန်၊ MPT ၏ အပိုထပ်ဆောင်ဝန်ဆောင်မူ၊ MNL ဘောလုံးသတင်းများ၊ သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိင်ပါသည်။
၅။ လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဘယ်လိုဂိမ်းအမျိုးအစားများရရှိနိုင်ပါသလဲ။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဝက်ဆိုက်မှ တိုက်ရိုက်အခမဲ့ ဆော့နိုင်ပြီး နာမည်ကြီး အက်ပလီကေးရှင်းဂိမ်းအကြောင်းအရာများကိုလဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 28, 2020 ဩဂုတ် 28, 2020 Categories Uncategorized
1. ကျွန်ုပ်ဖေ့ဘုတ်ကိုမိနစ်၂၀လောက်အသုံးပြုလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘေလ်ကအများကြီးဖြတ်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ။
သင့်ရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာ “ Auto Video Play” ကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ “ Auto Video Play” ပိတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Facebook setting မှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကာ “ media & contacts” မှတဆင့် auto play တွင် “ never auto play video (or) on Wi-Fi connection only” ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
2. အင်တာနက်ဒီအတိုင်းဖွင့်ထားပါတယ်၊ဘာမှအသုံးမပြုပဲလက်ကျန်ငွေတွေကဖြတ်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ။
လူကြီးမင်း၏မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းတွင် “ Background Data” ကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ “ Background Data” ပိတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။Android ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Setting ထဲက application manager မှတဆင့် application တခုစီရဲ့ data တွေကို လိုက်ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ IOS ဖုန်းတွေအတွက်တော့ setting ထဲက cellular data မှတဆင့် application တခုစီကို ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. ဘေလ်တွေအရမ်းကုန်နေပါတယ်၊ အသေးစိတ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ။ ဒေတာအသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ထား လို့ကောရလား။
4. အကုန်အကျသက်သာစေဖို့ဒေတာပက်ကေ့ချ်ဝယ်သုံးပါတယ်၊ဒါပေမယ့် အင်တာနက် သုံးရင် လက်ကျန်ငွေ ထဲကပဲဖြတ်သွားပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ။
တခါတလေမှာလူကြီးမင်းရဲ့ဖုန်းက application တွေ “ Auto Update” ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ထိုကြောင့် ဖုန်းထဲက “ Auto System Update” ကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။Android ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Setting ထဲက auto update ကို disable လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ IOS မှာဆိုရင်တော့ setting မှတဆင့် iTunes&App store မှတစ်ဆင့် disable ပြုလုပ်ထားရမှာဖြစ်သည်။
5. အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်တယ်သိပ်မကြာဘူးဘာမှမသုံးရသေးပဲဘေလ်အ များကြီးဖြတ်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Wi-Fi Hotspot ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Wi-Fi Hotspotဖွင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်း Password ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။Password မရှိတဲ့အခါ အခြားသူတွေက အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြု နိုင်တဲ့အတွက်ဒေတာတွေပိုမို ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် Computer နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း Window Auto Update တွေကို ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒေတာကုန်ကျမှုတွေကိုလျော့ချနိုင်မှာပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 28, 2020 အောက်တိုဘာ 1, 2020 Categories Uncategorized
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 27, 2020 Categories Uncategorized
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများထံမှ ဆင်းမ်ကတ် ၀ယ်ယူသည့်အခါ ဆောင်ရွက်ရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တကယ်လို့ကိုယ်တင်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်သုံးထားမထား ဘယ်လိုသိရပါ့မလဲ။
တခြားသူက မိမိမှတ်ပုံတင်ကို တနည်းနည်းနဲ့ရယူမှတ်ပုံတင်ထားပါက မိမိမှတခြား SIM အတွက်ထပ်မံမှတ်ပုံတင် ပါက ၂ခုထက်ပိုနေသော SIM များအတွက် ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ။
ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား တစ်ခုလျှင် အော်ပရေတာ တစ်ဦး၏ ဆင်းမ်ကတ် ၂ ခုသာ မှတ်ပုံတင်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် မိမိနိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမူရင်း ကိုယူဆောင်၍ မိမိကိုယ်တိုင် MPT ၏ သက်ဆိုင်ရာ Own Shop/ MPT Office တွေမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်၊၊